Acquia: Waa maxay Madal Xogta Macaamiil? | Martech Zone
Jimco, Janaayo 10, 2020 Talaado, Nofeembar 10, 2020 Douglas Karr
Maaddaama macaamiisha ay la xiriiraan oo ay ganacsiyo u abuuraan meheraddaada maanta, way sii adkaanaysaa in la ilaaliyo aragtida dhexe ee macaamiisha waqtiga dhabta ah. Waxaan saaka kulan la qaatay macmiilkeena kaas oo ay haysato dhibaatooyinkaas. Iibiyaha iimaylkoodu ka geddisan yahay moobiilladooda farriimaha moobiilka ee ka baxsan keydkooda xogta. Macaamiilku way is dhexgalayeen laakiin maxaa yeelay xogta udubdhexaadka ah lama habeynin, farriimaha mararka qaarkood ayaa kiciyey ama lagu diri jiray xog xun. Tani waxay soo saareysay baahi weyn oo loo qabay shaqaalahooda adeegga macaamiisha oo ka careysiisay macaamiishooda. Waxaan ka caawinaynaa iyaga dib-u-qaabeynta nidaamka adeegsiga farriin kale API taasi waxay ilaalin doontaa daacadnimada xogta.
Taasi waa dhowr wadiiqo oo sababaya arrin. Qiyaas silsilad meelo badan leh oo leh macaamil daacad ah, macaamil ganacsi tafaariiqeed, isdhexgal bulsheed, codsiyo adeegga macaamiisha, xogta biilka, iyo isdhexgalka moobilka Ku dar intaas dib-u-heshiisiinta jawaabaha suuq-geynta iyada oo loo marayo ilaha xogta omni-channel ik yikes. Tani waa sababta Isgaarsiinta Macluumaadka Macaamiisha isbeddelay oo ay ku sii xoogaysanayaan meheradda. CPDs waxay u saamaxdaa shirkad inay dhexgasho oo khariidayso xogta boqolaal ilo ah, falanqeyso xogta, sameyso saadaalin ku saleysan xogta, iyo si kafiican oo si sax ah ula macaamisho macaamiishooda kanaal walba Asal ahaan, waa aragti 360-degree ah oo macaamiisha ah.
Waa maxay CDP?
Mashruuca xogta macaamiisha (CDP) waa xog ururin macmiil isku dhafan oo ay maamulaan suuqleyda oo mideeya xogta macaamiisha shirkadda ee suuqgeynta, iibka iyo kanaalada adeegga si ay awood ugu siiso macaamiisha qaabeynta iyo wadista khibrada macaamiisha. - Gartner, Wareegga Hype ee Suuq-geynta Dijital ah iyo Xayeysiinta
Sida laga soo xigtay Machadka CDP, Qalabka Macluumaadka Macaamiilku wuxuu leeyahay saddex cunsur oo muhiim ah:
CDP waa nidaam suuq lagu maamulo - CDP-da waxaa dhisay oo gacanta ku haya waaxda suuq-geynta, maahan waaxda Teknolojiyada Macluumaadka shirkadaha. Qaar ka mid ah ilaha farsamada ayaa looga baahan doonaa dejinta iyo dayactirka CDP, laakiin uma baahna heerka xirfad farsamo ee mashruuc kaydinta xogta caadiga ah. Xaqiiqda dhabta ah ayaa ah in suuqgeyntu ay mas'uul ka tahay go'aaminta waxa nidaamka galaya iyo waxa u soo bandhigaya nidaamyada kale. Gaar ahaan, waxay ka dhigan tahay suuqgeynta inay isbeddel sameyn karto adigoon cidna fasax weydiisan, in kasta oo ay weli u baahan tahay caawimaad dibedda ah.
CDP wuxuu abuuraa xog ururin macmiil joogto ah - CDP wuxuu abuuraa aragti dhammaystiran oo macaamil kasta ah isagoo ka soo qabanaya xogta nidaamyo badan, isku xirka macluumaadka la xiriira isla macaamiisha, iyo keydinta macluumaadka si loola socdo dabeecadda waqti ka dib. CDP waxay ka kooban tahay aqoonsiyo shaqsiyadeed oo loo adeegsado in lagu bartilmaameedsado farriimaha suuq-geynta iyo loola socdo natiijooyinka suuq-geynta heer shaqsiyeed.
CDP wuxuu xogtaas ka dhigayaa mid ay heli karaan nidaamyo kale - xogta ku kaydsan CDP waxaa isticmaali kara nidaamyada kale falanqaynta iyo maaraynta isdhexgalka macaamiisha.
Macluumaadka Macaamiisha Acquia iyo Hub Hawlgelinta
Maaddaama suuqleyda ay si aad ah ugu sii kordhayaan dhammaan khibrada macaamiisha, in ay udub dhexaad u noqdaan xogta macaamiishooda kanaalka oo dhan, meelaha la taabto, iyo inta ay ku jiraan wareegga nolosha macaamiishooda ayaa muhiim noqota. Acquia waa hogaamiyaha warshadan iyo tan Macluumaadka Macaamiisha iyo Hub Ka Qaybgalka bixiyaa:
Is dhexgalka Xogta - isku dar dhammaan xogtaada, qaab kasta, oo ka imanaya xog kasta oo laga helo kanaalka dhijitaalka ah iyo kan jirka oo leh in ka badan 100 isku xirayaal horay loo dhisay iyo API-yo.
Tayada Data - jaangoynta, jarista, iyo u xilsaaro sifooyinka sida jinsiga, juqraafiga, iyo beddelka cinwaanka dhammaan macaamiisha. Isbarbar dhigid isku mid ah iyo jahwareer, AgilOne wuxuu ku xiraa dhammaan howlaha macaamiisha hal muuqaal oo macaamiil ah xitaa haddii ay jirto kaliya magac qeyb, cinwaan, ama email u dhigma. Xogta macaamiisha si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa markaa had iyo jeer waxaa ku jira xogta ugu cusub.
Falanqaynta Saadaalinta - is-barashada algorithms-ka saadaalinta ee u sheegaya AgilOne Analytics oo kaa caawinaya inaad si fiican ula macaamisho macaamiisha. AgilOne waxay bixisaa in kabadan 400 cabirrada cabbiraadda warbixinta ganacsiga ee u saamaxaya suuqleyda inay si fudud u abuuraan una qeexaan wixii shuruudo ah ee ay rabaan inay ku soo wargeliyaan iyo ficil ahaan ku dhex sameeyaan arjiga - iyada oo aan lahayn koodh qaas ah.
360-Degree Macluumaadka Macaamiisha - u samee macaamiil macaamiil ah astaamaha omni-channel oo dhammeystiran, isku darista xogta sida safarka macaamiisha shaqsiyeed, websaydhka iyo ka-qaybgalka emaylka, taariikhda macaamil ee omni-channel ee hore, xogta dadka, doorbididda wax soo saarka iyo talooyinka, suurtagalnimada iibsiga, iyo saadaalinta Analytics, oo ay ku jirto suurtagalnimada in la iibsado iyo kooxo ay macmiilkani iska leeyihiin. Astaamahan istaraatiijiyadeed waxay ku wargelinayaan halka ay maalgashadayaan, sida loo shakhsiyeeyo, iyo sida looga farxiyo macaamiishaada.
Kicinta Xogta Omni-Channel - dhex dhexaadinta dhex dhexaadinta, suuqleyda ayaa waliba qaabeyn kara oo bilaabi kara bulsheed, mobiil, fariin toos ah, xarun wicitaan, iyo dukaan ololeyn toos ah, iyadoo la sameynayo dhageystayaasha, talooyinka, iyo xog kasta oo kale oo laga soosaaray, oo loo heli karo qalab kasta oo ka mid ah nidaamka deegaankaaga suuq geynta.
Shakhsiyeynta la abaabulay - isku-duwidda farriinta shakhsi ahaaneed, nuxurka, iyo ololeyaasha dhammaan kanaallada dhijitaalka ah iyo kuwa jireed, iyadoo la siinayo suuqleyda cod joogto ah iyadoo aan loo eegaynin goorta iyo meesha uu macaamilku ka qayb qaadanayo. AgilOne sidoo kale waxay siisaa suuqleyda xaqiiqda ah inay u gudbinayaan farriinta saxda ah qof walba, maadaama AgilOne ay hubiso in dhammaan shaqsiyadeed ay ku saleysan tahay hal, nadiif ah, oo la isku habeeyay diiwaanka macaamiisha.
Tags: 360-degreeagilonecpdxogta macaamiishaMadal Macluumaadka Macaamiishaastaanta macaamiishahawlgelintaomni-kanaal
Liiska Hubinta Blogger-kaaga